Wafdiga uu hogaaminayo Farmaajo oo u ambabaxay China
MUQDISHO, Soomaaliya - Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Madaxwaynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed [Farmaajo] ayaa u ambabaxay China, isagoo ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, maanta oo Arbaco ah.
Madaxwaynaha iyo wafdigiisa ayaa kusii jeeda China, halkaasoo uu uga qaybgeli doono shirka Iskaashiga dalalka Qaaradda Afrika iyo dalka Shiinaha, kaasoo diirada lagu saari doono dhinacyadda Dhaqaalaha, Maalgeshiga iyo arrimo kale.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, Xilldhibaano, Saraakiil ciidan oo qaybaha kala duwan ee Hay'addaha amaanka dalka ayaa Madaxwayne Farmaajo iyo Wafdigiisa oo dhinacyo kala duwan isugu jira kasii sagootiyay garoonka diyaaradaha.
Inta uu ku sugan yahay China, waxuu Farmaajo la kulmi doonaa dhigiisa dalkaasi, Xi Jinping, kaasoo Wasiirka arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad uu ka dhawaajiyay inuu casuumaad rasmi ah uu u soo diray.
Waa socdaalkii ugu horeeyay ee uu Farmaajo ku tago dalka China tan iyo markii loo doortay xafiiska ugu sareeya Villa Soomaaliya, bishii Fabuary ee sanadkii hore 2017, isagoo horey safaro badan uu Madaxwaynaha ku kala bixiyey dalal dhowr ah.
Safarkaan uu ku bixiyay Farmaajo dalkaan ku yaala Qaarada Asia ayaa kusoo beegmaya xili Isbuucyo kahor uu kasoo laabtay safar uu ku bixiyay Jabuuti iyo Turkiga, kuwaasoo xiriir wanaagsan oo dhanka Ganacsiga la leh dowlada China.
Maxay salka ku haysaa booqashada Farmaajo ee China?
Soomaliya 27.08.2018. 10:10
Macluumaad hoose oo Garowe Online ka helayo Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in Farmaajo...
Ciidamada DF iyo Nin hubeysan oo dagaal ku dhexmaray Muqdisho
Soomaliya 17.04.2019. 00:01
Booliska DF oo Aamin Ambulance ka joojiyay tegida goobaha qaraxyada
Soomaliya 10.04.2019. 00:44
Dhacdooyinkii ugu hadalhaynta badnaa todobaadkan ee Muqdisho
Soomaliya 05.04.2019. 11:21
Xiliga Golaha Shacabka ka doodayo xaalada amni ee dalka oo la shaaciyay
Soomaliya 03.04.2019. 13:22
TOOS: Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare iyo Farmaajo oo ka baaqday
Soomaliya 01.04.2019. 12:23